अमेरिकामाथि एकसाथ १२ मिसाइल आक्रमण, कति भयो क्षति ? — Imandarmedia.com
अमेरिकामाथि एकसाथ १२ मिसाइल आक्रमण, कति भयो क्षति ?
एजेन्सी। तेस्रो विश्वयुद्धको संकेत देखिन थालेको छ। रुस–युक्रेन तनावका बीच इरानले अमेरिकामाथि हमला गरेको हो । इराकमा अमेरिकी दुतावासमा भएको मिसाइल आक्रमणको जिम्मेवारी इरानले लिएको छ।
इरानको रिभोल्युसनरी गार्डसले इरबिलमा १ दर्जन मिसाइल हानेको दावी गरेको छ। इरानको तर्फबाट सरकारी मिडियामा जारी बयान यो आक्रमण इरबिलमा इजरायलका रणनैतिक केन्द्रहरुमा गरिएको बताइएको छ।
मिसाइल आक्रमणपछि उत्तरी कुर्द क्षेत्रीय राजधानी इरबिलका गभर्नर ओमद खोशनावीले बताएअनुसार यी मिसाइलले अमेरिकी दुतावास र इरबिलमा एक कुर्दिश समाचार च्यानलको कार्यालयलाई निशाना बनाएका थिए।
मिसाइल आक्रमणपछि दुतावास परिसरमा आगो लागेको थियो। यो आक्रमणमा कुनै पनि मानवीय क्षतिको भने पुष्टि भएको छैन। इरानको सरकारी समाचार एजेन्सीका अनुसार रिभोल्युसनरी गार्डसले यो आक्रमणको जिम्मेवारी लिँदै बयान जारी गरेको छ।
रिभोल्युसनरी गार्डसले इजरायललाई धम्की पनि दिएको छ। इरानी सेनाले भनेको छ ‘इजरायलको कुनै पनि आक्रमणको जवाफ कठोर, निर्णायक र विनाशकारी तरिकाले दिइनेछ । यद्यपि अहिलेसम्म यो पुष्टि भएको छैन कि इरबिलमा इजरायलको उपस्थिति छ कि छैन।
यसका बावजुद मिसाइलको निशानामा अमेरिकी दूतावास र सैन्य अड्डा नै रहेका छन्। यस्तै यता युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरेपछि संसारका प्रभावशाली मुलुकहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसलाई एक्ल्याउन खोजिरहेका छन्।
तर रुसलाई विश्वको महाशक्ति मुलुक चीनको साथ प्राप्त छ। चीनले रुसलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराएको छैन किनकि उनीहरूबीच सैन्य साझेदारी छैन। तर रुसको सम्बन्धमा तटस्थताको नीति चाहिँ चीनले अपनाएको छ।
अरू मुलुकले जस्तो रुसलाई चीनले निन्दा गरेको छैन। युद्धलाई कूटनीति तथा वार्ताको माध्यमले अन्त्य गरिनुपर्नेमा चीनले निरन्तर जोड दिँदै आएको छ। रुस आफू संलग्न विवादमा अन्य राष्ट्र तटस्थ बसे मात्र पनि खुशी हुने गर्छ। चीनले अहिले त्यही कदममार्फत रुससँगको मित्रता कायम गरिरहेको छ ।
त्यस्तै युक्रेनी सेनाले विद्यार्थीलाई हतियार बितरण गरेको छ। युक्रेनी सेनाले विद्यार्थीलाई हतियार चलाउन तालिम दिइरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। रुसले मानवीय क्षति कम होस् भनेर चाहेकै कारण यु’द्ध लम्बिएको छ ।
राजधानी किभ नियन्त्रण लिन रुसी सेना अगाडि बढिरहेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको बेला रुसी मिडियाले चेचन्या स्पेशल फोर्स पनि किभ पुगेको बताएका छन्।
लडाइँमा कुशल मानिएको चेचेन आर्मीका प्रमुख नै किभ नजिक पुगेको रुसी मिडियाको दाबी छ । बाक्लो हिउँमा चेचन्या स्पेसल फोर्सका जवानहरु अघि बढेको भिडियो रुसी मिडियाले सार्वजनिक गरेका छन्।
रुसको अंगको रुपमा चेचन्या पनि युद्धमा सहभागी भएको छ। त्यसअघि लद्ध लम्बिन थालेपछि बेलारुसले पनि रुसी सैनिकलाई सहयोग गर्ने विवरण सार्वजनिक भएका थिए।
बेलारुसका सेनाले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा बख्तरबन्द गाडी परेड खेलेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। युद्धलाई शान्तिपूर्ण रुपमा टुंग्याउने प्रयास पनि भइरहेका छन्। यसैबीच पुनः दुबै देशका अधिकारीहरुले भिडियो बार्ता हुने बताएका छन्।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आजको वार्ता दुबै देशका राष्ट्राध्यक्षको वार्ताको समय मिलाउन हुने बताएका छन् । तर, रुसले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जेलेन्स्कीसँग वार्तालाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यसैबीच जेलेन्स्कीले पुनः नेटोलाई आफ्नो देशको हवाई क्षेत्रलाई निषेधित गर्न आग्रह गरेका छन्। यसअघि नेटोले त्यो गर्नु तेस्रो विश्वयु’द्ध हुने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तर, जेलेन्स्कीको पछिल्लो भनाईबारे नेटोले केही बोलेको छैन।
अमेरिकाले रुसले चीनसँग सैन्य र आर्थिक सहयोग मागेको दाबी गरेको छ। अमेरिकाले रुसलाई सहयोग त्यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी पनि दिएको छ। तर, चीनले भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै रुसले आफूसँग सहयोग नमागेको बताएको छ।